SomaliTalk.com » Jaamacadda Muqdisho oo deeq kala duwan gaarsiisay xeryaha Magaalada Muqdisho Barakacayaal ku jira
Guddiga gurmad abaaraha ee Jaamacadda Muqdisho ayaa gaarsiiyay barakacayaal ku jira xeryaha magaalada Muqdisho deeq isugu jirtay bur, bariis, caano, timir, saliid, dhar iyo daawo.
Deeqdan oo ahayd mid ay iska soo ururiyeen ardayda, macallimiinta, maamulka iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa qaarkood, kuwaasoo dhibka haysata walaalahooda Soomaaliyeed ka damqaday.
Halkan kadaawo sawira dheeri ah
“Qofkii la raba ilmihiisa sharaf inay ku noolaadaan – ha sharfo ilama kale ee u baahan kaalmada,” ayuu Dr. Cali Sheekh yiri intii ay socotay bixinta gargaarkii ay ku deeqday Jaamacadda Muqdisho barakacayaasha abaaraha.
Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee gacanta ka geystay gargaarkan ayaa waxaa ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden oo uu wakiil ka ahaa Sheekh C/rashiid Maxamed Aadan, jaaliyadda Australia oo uu wakiil ka ahaa Ibraahim Sheekh Bashiir iyo xarumo ay ka mid yihiin Access for support and development center oo London ku taalla, East Africa Education and Devemlopment, Somali new generation oo Holland ku taalla iyo qaar ka kale oo fara badan.
Ma ahan markii ugu horreysay oo guddiga gurmadka abaaraha ee Jaamacadda Muqdisho ay gargaar bani’aadamnimo u qaybiyaan barakacayaasha ku sugan Muqdisho, waxaana sidoo kale uu guddoomiyaha jaamacadda iyo wafdi ka socday ay 1,000 qoys gargaar ugu soo qaybiyeen xerooyinka qoxootiga ee Dhadhaab – dalka Kenya iyadoo la kaashatay hay’ado caalami ah.